Patanty Apple vaovao, OS X 10.11.5, fivarotana vaovao any India, Andro fidirana ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Patanty Apple vaovao, OS X 10.11.5, fivarotana vaovao any India, Andro fidirana ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Herinandro iray hafa no itondranay anao ny fanangonana ireo lahatsoratra navoakanay nandritra ny herinandro tao amin'ny bilaoginay hoe avy any Mac aho ary mety tsy afaka namaky ianao. Herinandro isan-kerinandro dia mihakaiky ny fihaonambe Apple Developers manerana izao tontolo izao ary izany no antony efa mila zatra ny tsaho mifandraika amin'ny Mac sy izao tontolo izao manodidina azy isika.
Tamin'ity herinandro ity isika dia efa nahita tsaho sy fivoahan'ny mety ho rafitra OS X vaovao sy ny fahatongavan'i Siri ho azy, fa hatramin'ny volana Jona ary miaraka amin'ny WWDC 2016 tsy afaka manamafy na mandray zavatra isika.
Natombokay tamin'ny alàlan'ny lahatsoratra niresaka momba ny patanty napetraka ny fanangonana fitendry haptic amin'ny solosaina Apple. Voapetraka indray ny orinasan'i Tim Cook lohalaharana amin'ny fanavaozana ny teknolojia aorian'ny asa fikarohana sy fampandrosoana lehibe. Eo amin'ny laharam-pahamehana hatrany amin'ny fanavaozana, Apple dia nahazo ny 7 aprily ny fankatoavan'ny Biraon'ny Patent ny tetikasa natolotra: ny tantara fitendry tsy misy fanalahidy ho an'ny solosaina.Fantatsika izao ny antsipirian'ny teknolojia mandrafitra an'ity klavijery ity ho an'ny solosainao finday.
Raha manantena ny hahatongavan'ny Apple Pay any amin'ny firenentsika ianao miaraka aminy ny Apple Wallet dia ho hitanao ny vaovao niresahanay fa mety ho any UK mpamily no mety ampio licence mpamily amin'ny Apple Wallet. Ny finday avo lenta finday dia varavarankely ho an'ny zavatra maro samihafa noho ny fanaontsika matetika, toy ny tapakila fiaramanidina, carte de crédit, ary maro hafa koa. Ary toa nodinihin'i Angletera ny mety hamela farafaharatsiny hamela fahazoan-dàlana hitondra fiara amin'ny findainy.
Tamin'ity herinandro ity dia nataon'i Apple ho an'ny mpampiasa ny kinova vaovao an'ny rafitra fikirakirana OS X El Capitan 10.11.5, izay azonao sintonina avy amin'ny Mac App Store, aorian'ny betas efatra amin'izany. Tsy ny fanavaozana ihany no navoaka ary ilay Apple Watch sy Apple TV dia efa misy ihany koa. Araka ny efa fantatrao, Apple dia namoaka betas ho an'ity kinova vaovao an'ny OS X ity nandritra ny herinandro maro ary toa androany no andro voafidy hahazoana ilay kinova farany hahatratra ireo solosaintsika.
Alohan'ny fitomboan'ny fitomboana tombanana eny an-tsena, Apple dia miatrika a toe-javatra mety hihena raha ny vaovao momba ny fampiasam-bolanao tsy mitsahatra izy ireo manaitra ny fahalianana sy fisalasalana an'ny mpampiasa. Rehefa afaka volana vitsivitsy taorian'ny nihena ny fandraisana anjaran'ny David einhorn ao amin'ny orinasa, ary andro vitsivitsy taty aoriana Carl Icahn, iray amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fampiasam-bola lehibe indrindra an'ny Apple, nivarotra ny anjarany rehetra, David Tepper -ny iray amin'ireo lehibe ho an'i Apple- dia nanaraka ny fandatsahana ny dian-tongotra ny anjarany 133 tapitrisa dolara.
Tamin'ity herinandro ity dia afaka namantatra vaovao misimisy momba ny kasain'ny Apple amin'ny tsena indiana izahay ao anatin'ny fotoana fohy ary fantatra fa mikasa ny hanokatra zavatra hafa izy ireo ary tsy misy kely noho ny Apple Store vaovao telo any amin'ny tanàn-dehibe any India. Amin'izany fomba izany, ny mponina amin'ity firenena ity dia afaka mahazo ny vokatra azo avy amin'ny marika paoma ary amin'izany dia afaka mampitombo ny varotra amin'ny tsena izay mipoitra ankehitriny na vao misondrotra noho ny sinoa.
Nofarananay tamin'ilay vaovao miresaka momba ny Andro fahatsiarovan-tena amin'ny fidirana amin'ny firenena. Izy io dia momba ny fankalazana ny Andro manerantany amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny fidirana amin'ny tranonkala. Mandroso ny haitao ary miaraka aminy ny Internet ary olona maro kokoa miaraka amin'ny olana amin'ny fidirana ho an'ireo izay mampiasa fitaovana roa ary noho io antony io dia ilaina ny mivoatra amin'ireo resaka ireo.
Eny, hatreto ny vaovao voaangona androany. Manentana anao izahay hisitrika kely ao amin'ny bilaoginay ary ho hitanao ireo rehetra izay tsy nampidirinay tamin'ity fanangonana ity, indrindra ireo fampiharana izay afaka fotoana voafetra na nampidina ny vidiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Patanty Apple vaovao, OS X 10.11.5, fivarotana vaovao any India, Andro fidirana ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Apple dia mikasa ny hanitatra ny Apple Store ao amin'ny Fifth Avenue
Infuse dia mampiditra fomba fijerin'ny Library sy ny maro hafa